मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट र हायर पर्चेजमा नयाँ व्यवस्था आउँदै, ‘मौद्रिक नीतिमा वर्कआउट’ – BikashNews
मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट र हायर पर्चेजमा नयाँ व्यवस्था आउँदै, ‘मौद्रिक नीतिमा वर्कआउट’
२०७६ जेठ २१ गते १५:०९ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अझ व्यवस्थित र प्रतिफल योग्य बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक लगानी भनेर राज्यले अर्थाउदै आएको छ ।
देशको आवश्यकता र पुँजीको पर्याप्तलाई हेरेर विशेषतः राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमामा विभिन्न समयमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले संकेत गरेका छन् । ‘यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न म वर्कआउट गरिरहेको छु,’ उनले भने-‘नयाँ व्यवस्था आउन सक्छ ।’
आगामी आवको बजेटमा धितोपत्र बजारलाई फराकिलो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले लिएको आर्थिक विकासको नीतिलाई सघाउन र वित्तीय स्थायित्वमापनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको हो । राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीका विषयमा पनि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण भएको र यसको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने हुँदा सरकारको बजेटलाई सघाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार समेत भएकोले सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थालाई सघाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
हाल सेयर धितोमा मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सेयर घट्नुका विभिन्न कारणमध्ये मार्जिन ल्याण्डिङ पनि रहेको लगानीकर्ताबाट ठूलो गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाएको थियो । हायर पर्चेज तथा रियल स्टेटमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्थित गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरताका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ । वित्तीय पहुँच र समावेशीतालाई आधार बनाउँदै सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुलाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले थप परिस्कृत बनाउने छ । सरकारले बजेटमार्फत ठूला (वाणिज्य) बैंकहरूको मर्ज तथा प्राप्तिलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समेट्ने भएको छ ।
आगलागीबाट ३२ पसल नष्ट, एक जनाले साढे ३१ लाख क्षतिपूर्ति पाउँदा अरुको हात खाली
सरकारले सहकारीकर्मीको घाँटी रेट्यो, अब ५०० सहकारी पनि बाँकी रहँदैनन्-उत्तमप्रसाद बाँस्काेटा
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय अझै गएन अनलाइन प्रणालीमा, कम्पनी दर्ता गर्न ५ दिनसम्म लाग्ने
स्वदेशी उद्योगका लागि भारतले घटायो संस्थागत आयकरको दर, शेयरकाे पुँजीगत लाभकर पनि छुट
शर्त उल्लंघन गर्ने २० हाइड्रो कम्पनी कार्वाहीमा, विद्युत विभागले उठायो १५ लाख जरिवाना
संघीय स्रोत परिचालन गर्न अब ‘हिट गर्नुपर्ने’ अवस्था आएको छ : डा. शान्तराज सुवेदी
मार्जिन कारोबारमा ७ दिनले चुक्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, २१० कम्पनी अयोग्य, ठूला कम्पनीनै परेनन्
झुट्टा बीमा दावी गर्नेहरु अब कालोसूचिमा, कर्मचारीलाई कम्पनी फेर्न कडाई, प्रतिस्पर्धी विरुद्ध बोल्न पनि नपाईने